European yakajairwa isina mvura switch uye socket bhokisi. IP55, Iyo isina mvura bhokisi inogona kusangana neyeEuropean mwero modular, inogona kupfuura CE, TUV, NF bvunzo. iyo waranti ndeye makore mashanu Iyo yekumberi yakagadzirwa neiyo yepamusoro girazi yekuchengetedza nharaunda PC zvinhu. Iyo yakaonda kwazvo, yakapusa uye yakanaka. Hazvina kukosha kuvhura bhokisi kana iwe uchinge wabatidza-off switch.
Briteni yakajairwa isina mvura switch uye socket. IP66, Iyo switch yatove neEC, uye socket mvura isina bhokisi inogona kusangana neBS yedu socket, iyo inogona kupfuura BS, GCC bvunzo, waranti ndeye makore mashanu Iyo yekumberi yakagadzirwa kwepamusoro giredhi yezvakatipirwa kuchengetedza PC zvinhu. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo socket BOX inogadzirwa yepamusoro giredhi yekudzivirira PC zvinhu.
Commercial Linele chitarisiko chedu cheDoratoratcr mutsara wiring zvishandiso isvery elegant uye yakanaka.Our zvishandiso zvemahara zviri nyore uye nekukurumidza kuisaThe p astic wallplate yakagadzirwa yakanyanya gradeen mazingira- kuchengetedza therrr oset uye thermoplasticsaterial.